कोरोनाको कहर : अर्गानिक ढोगभेट - Jhilko
कोरोनाको कहर : अर्गानिक ढोगभेट
ज्यानमारा कोरोना भाइरसले मानिसहरुको इहलीला मात्र समाप्त पारेको छैन, विश्वका अधिकांश सभ्यता र संस्कृतिमाथि पनि प्रभाव पार्दै लगेको छ । यो भाइरसको प्रभावका बारेमा रौंचिरा विश्लेषण गर्ने हो भने यसले आधुनिक सभ्यता र संस्कृतिलाई पनि चुनौती खडा गरेको छ । परम्परागत सभ्यता, संस्कृतिमा फर्कनेहरुका लागि भने रेशममार्ग नै खोल्ने देखिन्छ । नेपालजस्तो पूर्वीय सभ्यता र संस्कृतिमा चाँद लगाउन पनि बेर छैन ।
सबैभन्दा बढी पाश्चात्य भनिएको सभ्यता र संस्कृति जसलाई आधुनिक सभ्यता–संस्कृतिको पनि नाम दिइएको छ, त्यसलाई परेको छ । हुनत यो भाइरस एसियाली सभ्यता भएको मुलुक चीनबाट उदायो । तर, कालान्तरमा भने यो भाइरसले पश्चिमा सभ्यता र संस्कृतिमाथि नै धावा बोल्ने देखिन्छ । पश्चिमा सभ्यता संस्कृतिमाथि कसरी प्रभाव पार्ला भन्ने जिज्ञासा उठ्न सक्छ । त्यसको सानो उदाहरण मात्र पेश गर्ने हो भने नै काफी हुन्छ । यसमध्ये पश्चिमा सभ्यता अनुसार गरिने त्यहाँको ढोगभेटलाई नै लिऊँ । उनीहरुकहाँ हात मिलाउने चलन छ । त्यतिमात्र होइन,‘हग’ हाल्ने, सार्वजनिक स्थलमै चुम्माचाटी गर्ने चलन छ । अब कोरोना भाइरसका कारण यस्तो हात मिलाउने, हग हाल्ने, चुम्माचाटी गर्ने क्रियाकलापलाई ठाडै छोड्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा कोरोनाको प्रारम्भिक आक्रमण मै इहलीला समाप्त हुनेछ । चर्चमा जाने, सामूहिक प्रार्थना गर्ने, कन्सर्ट आदिमा भेला हुने आदि कुराले त मास मर्डर गराउने सम्भावना रहन्छ । यसरी पश्चिमा सभ्यता र संस्कृतिको दोहोलो कोरोनाले काढ्ने निश्चित छ ।
यता पूर्वीय सभ्यता र संस्कृति मान्नेलाई भने कोरोना भाइरसका कारण परम्परागत (अग्र्यानिक) सभ्यता र संस्कृतिमा फर्कने बाटो देखाइदिएको छ । यसको पहिलो उदाहरण ढोगभेटबाट सुरु भएको छ । कोरोनाको कहर सुरु भएयता नेपालमा ढोगभेट गर्ने आधुनिक शैलीको साटो परैबाट जम्लाहात (नमस्कार) गर्ने चलन चलेको छ । नेपालका गाउँघरमा समेत विस्थापित हुँदै गएको जम्लाहात (नमस्कार) आजभोलि जताततै देख्न पाइन्छ । एकाध हात परै बसेर नमस्कार नमस्कार गरेको सुनिन्छ, देखिन्छ । तर, हात मिलाएको, अंगालो हालेको कतै देख्न पाइन्न । यसरी नै केही समयसम्म कोरोनाको कहर रहे नेपाल पुनः पूर्वीय सभ्यता–संस्कृतितर्फ फर्कने सम्भावना छ । यस्तो भयो भने पश्चिमाको सभ्यता र संस्कृति हटेर जाने कुरालाई कसैले नकार्न सक्तैन ।
कोरोनाको कहरले सिंगै देशमा यस्तो भैराखेको बेला गण्डक प्रदेशले झनै अग्र्यानिक ढोगभेटलाई मान्यता दिएको खबर आएको छ । यसैपनि आजको गण्डक प्रदेश भनेको तमु–मगरहरुकै परम्परागत सभ्यता, संस्कृति भएको प्रदेश हो । प्रदेशको नाम तमु–मगरात राख्न नसकेपनि त्यहाँका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हालैबाट भुइँसोरी अर्थात् खुट्टामा ढोग्ने चलनलाई पुनः नवीकरण गरेका छन् । अर्थात् ढोगभेट मामिलामा गण्डक प्रदेशले स्वायत्तता लागु गरेको छ । यस्तो ढोगभेट गर्नु गण्डक प्रदेशको आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हो । यसलाई राजनैतिक विज्ञानमा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार पनि भनिन्छ । अबका केही समयपछि गण्डक प्रदेशमा मानिसहरु आफ्ना मान्यजनको खुट्टा ढोगिरहेको देखियो भनेपनि अनौठो नमाने हुन्छ । तर यसरी खुट्टा ढोग्दा ढाडमा आउने समस्याको बारेमा भने गण्डक प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन–अनुसन्धान गरिएको बाहिर ल्याएको छैन ।
पार्टी कसरी बन्छ ?
नेताको मुखमा आइरहने यो अजीर्ण सवाल हो । नेतृत्वमा पुगेकाहरुलाई पार्टी बनिसकेको भ्रम छ । नेतृत्वमा नपुगेकालाई पार्टी बन्दै नबनेको भ्रम छ । यीदुई भ्रमबीच साँचो भ्रम कुन होला ? भ्रम पनि साँचो र झुटो पनि होला र ?भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, यो सूत्रको हल भने भूतपूर्व माओवादी, नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादीमा पुगेका डा. बाबुराम भट्टराईको सूत्रबद्ध अनुसन्धानात्मक व्याख्याले पुष्टि गरेकै छ ।
उनले जहिल्यै पनि गिलासमा राखेको पानीलाई तुलना गर्छन् । गिलासमा राखिएको पानी आधि भरिएको तर पूरै नभरिएको तर्क गर्छन् । आधा भरिएको कुरा पनि ठीक हो र पूरै भरिन बाँकी रहेको कुरा पनि त ठीक हो । यसै सूत्रलाई मध्यनजर गर्ने हो भने नेपालको राजनैतिक पार्टी बनिसकेको कुरा पनि ठीक हो । पूरै बनिनसकेको कुरा पनि त ठीक हो । यसर्थ, पार्टी बनिसकेको कुरा पनि ठीक हो । पूरै बनिनसकेको कुरा पनि ठीक हो । नेताहरुले ओठे जवाफ लगाउने दुबै कुरा भ्रम हुन् । तसर्थ, भ्रम र भ्रममा तुलना गर्दा दुबै साँचो हुन्छन् कि कसो ? समयबद्ध साप्ताहिकबाट
काठमाडौं उपत्याकामा सडक विस्तारको नयाँ योजना नबनाइने
देउवा–सिटौलाको पुनर्मिलनले निधीको राजनीति सङ्कटमा
मनोरञ्जनका लागि नचाउँदै रकम संकलन गर्ने भालु्को उद्धार
लोपोन्मुख र संकटापन्न वन्यजन्तुको सूचीमा रहेको भालुलाई डिभिजन वन कार्यालय लहानको...
जाजरकोटमा विप्लव समूहका एक कार्यकर्ता पक्राउ
पुनले विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन र ल्याउन सक्रिय भूमिका...
विभागको टोलीले आज निरीक्षणका क्रममा उक्त ग्यास उद्योगले पुरानो भल्ब मर्मत गरेर प्रयोग...
सरकार रक्षात्मक, प्रतिपक्ष उदास
संसको दुई तिहाइ बहुमतलाई यस्तै शृङ्गारको साधनको रुपमा लिइरहेको भान हुन्छ । सरकारको...